Blog – TheMadeInMyanmar
August 27, 2017 Khin TheBurmese0Clutches, Handmade, Sewing
Fabric: Black vinyl fabric (100% PVC)Materials used: Magnetic snap, Heavyweight interfacing, Sew-in interfacing, Flat back pearls cabochonSize: 12 inch x…
Zebra 12inch Macbook/Tablet bag
August 25, 2017 Khin TheBurmese0Clutches, Handmade, Sewing
Fabric: Zebra Double Knit (100% polyester) (Imported from the USA)Materials used: Magnetic snap, Lightweight Interfacing, Sew-in Foam Interfacing Size: 12 inch…
Myanmar Lace Handmade Clutch
Fabric: Myanmar Lace (Made in Myanmar)Materials used: Magnetic snap, Lightweight Interfacing, Sew-in Foam Interfacing Size: 10″ x 5″ Front View…
August 4, 2017 Khin TheBurmese0Clutches, Handmade, Sewing
Fabric: Polyester Spandex Lamé Knit Gold (95% Polyester/ 5% Lycra Spandex)Materials used: Magnetic snap, Pellon 931TD Mid to Heavyweight Fusible Interfacing,…
ဂျပန်တက္ကသိုလ်နှင့် ကောလိပ်ကျောင်းများတွင် အင်တာဗျူး ဖြေဆိုရာတွင် အထောက်အကူပြုမေးခွန်းများ
July 26, 2017 Khin TheBurmese0Learn Japanese, Tips on Study in Japan
– အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အင်တာဗျူးမေးခွန်းတွေက National College of Technology နဲ့ 国際協和奨学会 စကောလားရှစ်ကို လျှောက်ထားခဲ့တုန်းက အသုံးပြုထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ – နောက်ပြီး နမူနာမေးခွန်းအနေနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ မေးလာတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့…
July 25, 2017 Khin TheBurmese0Clutches, Handmade, Sewing
Fabric: Polyester (Zebra Double Knit)Materials used: Magnetic snap, Pellon 931TD Mid to Heavyweight Fusible Interfacing, Cardboard Size: 11 inch x 6…
Drawing on hand – Art of Myanmar
July 21, 2017 Khin TheBurmese0Diaries of Myanmar, Made in Myanmar
Drawing on hand has becomeapopular item in Bagan, ancient city of Myanmar. You can find the local artists at…
Thunderbolt3(USB-C) port ပါတဲ့ MacBook/MacBook Pro အတွက် အသုံးဝင်မယ့် Adapter များ
July 20, 2017 Khin TheBurmese0Macbook, Tips
USB-C to USB Adapter Apple က ထုတ်တာဆိုရင်တော့ $19.00 ရှိပါတယ်။ USB Flash Drive နဲ့ ချိတ်ဆက်ချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ Macbook မှာ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေကို အားသွင်းချင်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် USB-C…
Chicken & King Oyster Mushroom Soup
July 11, 2017 Khin TheBurmese0Food, He Cooks For Me, Recipe by Wunna
http://www.themadeinmyanmar.com/blog”> ကြာချိန် – ၁ နာရီ ၄၀ မိနစ် ပမာဏ – ၂ ယောက်စာ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၁။ King Oyster မှို ၂ တုံး ၂။ ခရမ်းချဉ်သီး အလုံးကြီး ၄…
Korean Tofu with Baby Spinach
ကြာချိန် – ၁၅ မိနစ် ပမာဏ – ၂ ယောက်စာ ပါဝင်ပစ္စည်းများ ၁။ ကိုရီးယားတို့ဖူး ပုံပါအတိုင်း (၉၁ ဂရမ်) ၂။ ဟင်းနုနွယ် (Baby spinach) ၃။ ဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းအသေး ၁ ဇွန်း…
FAQs for EJU (Eng)
July 11, 2017 Khin TheBurmese0Tips on Study in Japan
၁။ EJU စာမေးပွဲ ဖြေဖို့အတွက် အသက်ကန့်သတ်ချက် ရှိလား? အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံက တက္ကသိုလ်နဲ့ ကောလိပ်ကျောင်း၊ သက်မွေးပညာသင်ကျောင်းတွေမှာ undergraduate course ကို တက်ရောက်ချင်သူများ ဖြေဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂။ ဂျပန်စာအဆင့် (JLPT level)…
Bread I love
July 11, 2017 Khin TheBurmese0Bread
အစားအသောက်တွေထဲမှာ ပေါင်မုန့်လို့ဆိုရင် အကြိုက်ဆုံးလို့ ဆိုရလောက်အောင်ပဲ အတော်များများ ငြင်းခဲပြီး စားပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာတော့ ကျွန်မနှစ်သက်မိတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေအကြောင်း ရေးသွားပါမယ်။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေရှိရင်လဲ ကွန်မန့်မှာ အကြံပြုပေးဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ အမေရိကားက စားသောက်ဆိုင်တွေရဲ့ စတိုင်…
Copyright © 2017 Themadeinmyanmar. All rights reserved.